MacX MediaTrans, iyo inokurumidza nzira yekuchengetedza yako iPHone data [Mahara rezinesi] | IPhone nhau
MacX MediaTrans, iyo inokurumidza nzira yekuchengetedza yako iPHone data [Mahara rezinesi]
Iwe unoda here kuwana chirongwa che backups zveiyo iPhone mahara zvachose? Kuvhurwa kwemidziyo mitsva yeApple, senge iPhone 8 uye iPhone 8 Uyezve, Izvo zvatove chokwadi, asi kusvika kweiyo nyowani yekushandisa sisitimu yakatonyanya kudaro iOS 11, sisitimu izere neese magadzirirwo uye anoshanda matsva: chitsva "Mafaira" app, nyowani multitasking maficha, basa re "Dhonza & Kudonhedza", rakanyatso gadziriswazve kudzora nzvimbo iyo inonyanya kubatsira uye inoshanda, zvichingodaro. Uye apa ndipo apo backup iwe yaungaite nayo MacX MediaTrans seimwe nzira yeiyo yepamutemo nzira.
Uine hutsva hwakawanda, zvakajairika kuti iwe unoshuva nakidzwa neakanakisa iOS 11 chiitiko pane yako iPhone kana iPad. Ndokusaka zvakakosha kuti iwe ugare uine backup zadzisa nemifananidzo yako yese, mavhidhiyo, mimhanzi, mabhuku, nezvimwe, uye izvo zvaunogona Kurumidza uye nyore kuendesa kune yako nyowani iPhone kana chishandiso neIOS 11 yakaiswa kubva pakutanga.kana. Kune izvi isu tine iCloud uye iTunes, zvisinei, pane imwe yakazara uye inokurumidza imwe nzira: MacX MediaTrans.
1 Nzira dzakanakisa dzeTunes uye iCloud: MacX MediaTrans
2 Main maficha uye zvakanakira MacX MediaTrans zvichienzaniswa neICloud uye iTunes
3 Edza MacX MediaTrans mahara uye gutsikana nezvako
4 Tora mukana wekupihwa uye tora MacX Transfer yeupenyu pahafu yemutengo
Nzira dzakanakisa dzeTunes uye iCloud: MacX MediaTrans
Kwemakore, iTunes rave rudzi rwe "yakavhenganiswa bhegi", uye kunyangwe Apple yakachenesa neshanduro yazvino, chirongwa ichi chichiri kuda kugadziriswazve kwakadzika. Naizvozvo, vanhu vazhinji vanoomerwa nekushandisa asi, vachifunga kuti zvakakosha, vanomanikidzwa kushandisa iTunes kugadzira makopi ekuchengetedza kana kuendesa data kune avo maIOS.
Vamwe, kune rimwe divi, vanosarudza kushandisa iCloud, Apple's gore chikuva icho, zvisinei, chine zvikanganiso zviviri zvakakosha: chekutanga, kana zvasvika pakusunungura iyo iPhone, inoshanda chete kurasa yekupedzisira izere backup; uye chechipiri, nekuti zvinoenderana netiweki yeWiFi, ICloud inogona kunonoka uye inoshungurudza.
Takatarisana nemhinduro mbiri idzi dzatinadzo MacX MediaTrans, zvimwe iyo yakanakisa iTunes imwe nzira yeMac iyo yaunogona kushandisa yako iPhone uye iPad mafaera nyore uye nekukurumidza.
Main maficha uye zvakanakira MacX MediaTrans zvichienzaniswa neICloud uye iTunes
Mune tafura inotevera tinogona kuona mabhenefiti makuru ainopa MacX MediaTrans uchienzaniswa neTunes uye iCloud senge sisitimu yekuchengetedza uye kuendesa ruzivo rweyako kifaa iOS:
Sezvauri kuona nekuda kwetafura yapfuura, pane zvakawanda zvakanaka zvatinogona kuwana tichishandisa MacX MediaTrans kuchengetedza uye kutumira ruzivo pakati pezvinhu zvedu zveIOS neMac:
Iyo inotsigira iwo mamwe marudzi emafaira se iTunes uye iCloud uye inotibvumidza isu kuti tiwedzere, kudzima uye kugadzirisa playlists sezvakaita Apple zvirongwa.
Izvo zvinokurumidza kwazvo kubvumira kuendeswa kusvika pamazana mapikicha mu 100K mhando mumasekondi masere chete.
Iwe uchawana nzvimbo yekuchengetera sezvo ichibvumidza kumanikidza mafaera kuitira kuti aremere.
Iwe unogona bvisa mapikicha uye mavhidhiyo kubva ku iPhone yako kana iPad, chimwe chinhu chausingakwanise kuita neICloud kana iTunes backup.
Iwe unogona shandisa yako iPhone sekunge yaive pendrive kutakura ruzivo.
Uye iwe unogona kunyange gadzira tsika toni.
Zvese izvi nezvimwe, hapana muganho wekuchengetedza, hapana fomati muganho uye hapana muganho wedhizaini.
Kune ese aya zvikonzero, zviri nyore kufunga izvozvo MacX MediaTrans ndiyo yakanakisa nzira kune iTunes uye iCloud kune backup uye kuendesa mavhidhiyo, mapikicha, mumhanzi, ebook, nezvimwe. pakati pe iPhone, iPad, iPod touch neMac.Asi zviri nyore kutenda kuti ukazviedza mahara.
Edza MacX MediaTrans mahara uye gutsikana nezvako
Chikwata cheMacX MediaTrans chine chokwadi chekuti iwe uchachichida izvo zvekuti vanokupa iwe yemahara uye inoshanda muyedzo vhezheni. Kuti utore, nyatso tsikirira pano, isa email yako, uye kurodha pasi kunotanga ipapo ipapo.
Kamwe yaiswa pane yako Mac, vhura chirongwa uye pinda iyo yekubvuma kodhin iyo yawakagamuchira neemail. Kubva panguva ino iwe unogona nakidzwa neMacX MediaTrans pasina chero muganho uye zvachose mahara, kunyangwe iwe usinga kwanise kuwana zvigadziriso zvemangwana. Asi usazvidya moyo, nekuti tichine chimwe chishamiso. Parizvino, edza iyo yakaiswa vhezheni. Kuti uite izvi, ingobatanidza chero iPhone kana iPad chishandiso kuMac yako, uye MacX Kutamisa inozozviziva izvozvi
Iye zvino unongofanirwa kusarudza chero sarudzo dziripo, uye nekukurumidza uye nyore iwe unogona kubata ako ese mafaera. Semuenzaniso, ini ndasarudza "Music Manager". MacX MediaTrans inoongorora yega mimhanzi pane yangu kifaa uye inozviratidza kwandiri pachiratidziro kuti ndikwanise kuzvibata sezvandinoda. Ini ndinogona kusevha matraki ese, kugadzira uye kugadzirisa playlists, kana kuyengerera pamusoro penziyo, kuidzima, kuwedzera kune yekutamba, uye nezvimwe. Zvakareruka sekudaro.
Kana iwe uchida kuona chishandiso chiri kushanda, heino vhidhiyo yakazara.
Tora mukana wekupihwa uye tora MacX Transfer yeupenyu pahafu yemutengo
Chokwadi. Paunenge waedza MacX Transfer, uye chete kana zvichikunyengetedza, unogona kutora mukana weichi chakakosha kupihwa kwenguva yakatarwa uye iwe unogona kuzviita neMacX Transfer yeMac licence kwe € 29,95 chete panzvimbo yeyakajairwa € 59,95. Iyi raisensi yeMacs maviri, asi iwe unogona zvakare kuwana zvimwe zvinopihwa nemutengo unoshamisa. Uye zvakare, une 30 zuva rekudzoserwa mari garandi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » MacX MediaTrans, iyo inokurumidza nzira yekuchengetedza yako iPHone data [Mahara rezinesi]
iOS 11 yatove pa25% yemidziyo yakatsigirwa
Machaja anoenderana nekuchaja nekukurumidza iPhone 8, 8 Plus uye X